तपाईंको वेब स्क्र्यापिंग परियोजनाहरूको लागि तपाईंलाई किन क्लाउड स्क्रेपरको आवश्यकता छ? - Semalt उत्तर
क्लाउड स्क्रैपर एक Node.js लाइब्रेरी हो क्लाउडफ्लेयरको एन्टि-डीडोज पृष्ठहरू बाइपास गर्न प्रयोग गरिन्छ। आजकल, ब्ल्गरहरू र वेबमास्टर्स मार्केटिंग निर्णय गर्न सही र स्वच्छ डाटामा निर्भर छन्। यो जहाँ क्लाउड स्क्रैपर आउँदछ। क्लाउड स्क्रैपरको साथ, तपाईं सजिलैसँग जाभास्क्रिप्ट लोड गर्ने साइटहरू र क्लाउडफ्लेयर सुरक्षित वेब पृष्ठहरू दुवै स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ।
क्लाउड स्क्र्यापर किन छनौट गर्ने?
एक ई-कमर्स वेबसाइट को मालिक को रूप मा, तपाइँ तपाइँको प्रतिस्पर्धी को प्रगति ट्रयाक गर्न आवश्यक छ। तपाईं अन्य वेबसाइटहरूबाट डाटा निकाल्न र तपाईंको स्थानीय मेशिन प्रयोग गरेर डाटा विश्लेषण कार्यान्वयन गर्न वा विस्तृत वेब स्क्र्यापिंग सेवाहरूको लागि पेशेवरहरू राख्न निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। वेब डाटा निकासी क्लाउड स्क्रैपरको साथ अधिक सहज भयो।
हालसालै विगतमा, डायनामिक वेबसाईटहरूबाट विशाल मात्रामा डाटा निकाल्दा बजारहरूले प्राविधिक कठिनाइको सामना गरे। तपाईं यो सफ्टवेयरसँग काम गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईंको सर्भरले RAIDs वा भर्चुअलाइजेशन वातावरणहरू जस्तै वर्चुअलबक्स, जेन, र VMware जस्ता हार्डवेयर समावेश गर्दछ।
क्लाउडफ्लेयरको anti-DDoS पृष्ठलाई बाइपास गर्दै
क्लाउड वेब स्क्रेपरले कुशलतापूर्वक तपाईंको उत्पन्न साइटम्याप प्रयोग गरी स्थिर र गतिशील वेबसाइटहरूबाट डाटा निकाल्दछ। तपाईंको योजना (साइटम्याप) सिर्जना गर्न Chrome क्लाउड स्क्र्यापर एक्स्टेन्सन प्रयोग गर्नुहोस् र यसलाई बाँकी वेब स्क्र्यापि tasks कार्यहरू गर्न दिनुहोस्। आवश्यक उपकरणहरू बिना, क्लाउड माइग्रेसन पर्याप्त बोझो काम हुन सक्छ।
यदि तपाईं भरपर्दो, छिटो, सस्तो, र सरल तरिकाले सर्भर माइग्रेसनहरू प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ भने क्लाउड स्क्र्यापर विचार गर्न सफ्टवेयर हो। उपकरणले एक सीधा र भरपर्दो प्रतिकृति समाधान प्रदान गरेर कार्य गर्दछ मुख्यतया क्लाउड माइग्रेसन कार्यहरूको लागि निर्मित। यहाँ आउने प्रमुख कारणहरू छन् किन तपाईलाई आउँदो प्रोजेक्टहरूको लागि क्लाउड वेब स्क्रेपरलाई विचार गर्नु आवश्यक छ:
डाटा ब्याकअप - क्लाउडस्क्र्यापर तपाईंको स्क्र्याप गरिएको डाटाको लागि एक विश्वसनीय बैकअप समाधानको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस सफ्टवेयरको साथ तपाईलाई क्र्यासको नतीजाको रूपमा तपाईको हार्ड ड्राइभको ब्याक अप राख्न विकासकर्ताहरूको फौज भाँडा लिन आवश्यक पर्दैन।
गोपनीयता - जब यो अनलाइन मार्केटिंगको कुरा आउँदछ, गोपनीयता एक आवश्यक शर्त हो। यदि तपाईंको मार्केटिंग रणनीति आक्रमणकारीहरूको हातमा पर्दछ भने, तपाईं लाखौं डलर गुमाउन सक्नुहुनेछ। क्लाउड स्क्रैपरले तपाइँको सर्भर डेटा सीधा बादलमा अपलोड गर्दछ तेस्रो पक्षहरू समावेश नगरी। तपाईंको डाटा सुरक्षित जडानको प्रयोगको माध्यमद्वारा क्लाउडमा सुरक्षित स्थानान्तरण गरिएको छ।
नेटवर्क-सचेत - क्लाउड स्क्रेपर स्थिर र व्यापक नेटवर्क दुबैको लागि काम गर्दछ। सफ्टवेयरले Azure Virtual नेटवर्क, EC2 सार्वजनिक क्लाउड, र हाइब्रिड क्लाउड समर्थन गर्दछ। Cloudflare सुरक्षा सक्रिय छ कि छैन को बारे निश्चित छैन? आराम गर्नुहोस् यस सफ्टवेयरले तर्कलाई समेट्छ जसले लक्षित डेटा निकाल्छ, त्रुटिहरू समाधान गर्दछ, डाटा पेश गर्दछ, र पृष्ठको मुख्य भाग ग्राहकहरूलाई दिन्छ।
क्लाउड वेब स्क्रेपर प्रयोग गर्दा अनुरूप परिणामहरू प्राप्त गर्न, प्रति सत्रको चुनौती समाधान गर्नका लागि समर्थन गर्ने कुकीहरू विचार गर्नुहोस्, पुन: क्याप्चाको लागि जाँच गर्दै, र द्रुत पुनःनिर्देशनहरूको साथ वेब पृष्ठहरूलाई समर्थन गर्दछ। क्लाउडफ्लेयर प्रयोग गर्दा ध्यानमा राख्न यहाँ साधारण एन्टि-बॉट पृष्ठहरू छन्।
रि क्याप्चाको साथ पृष्ठ;
पृष्ठ जुन मूल वेबसाइटमा पुन: निर्देशित गर्दछ;
त्रुटि संग पृष्ठ;
विश्वसनीय जाभास्क्रिप्ट र HTML पृष्ठ चुनौतीको साथ;
क्लाउड स्क्रेपर तपाईको आगमन वेब स्क्र्यापिंग परियोजनाहरूको लागि उत्तम समाधान हो। यो सफ्टवेयर बजारले सर्वरहरूलाई क्लाउडमा सार्न व्यापक रूपमा प्रयोग गर्दछ। भाग्यवस, तपाईंसँग डराउनु पर्दैन यदि तपाईंसँग कुनै कोडिंग जानकारी छैन भने। तपाईंको मेसिनमा क्लाउड वेब स्क्रैपर स्थापना गर्नुहोस् र सफ्टवेयरलाई तपाईंको क्लाउड माइग्रेसन प्रोजेक्टहरूलाई स्वचालित रूपमा अनुमति दिनुहोस्।